Iwe Wakavhura kune Nyowani Yemukati Management Sisitimu? | Martech Zone
Iwe Wakavhura kune Nyowani Yemukati Management Sisitimu?
Chishanu, June 23, 2017 Svondo, June 25, 2017 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura, 100% yevatengi vedu yakashandiswa WordPress sevavo zvemukati manejimendi system. Makore maviri chete gare gare uye nhamba iyoyo yadonha nechetatu. Sezvo ini ndanga ndichigadzira nekugadzira saiti muWordPress kwemakumi gumi ikozvino, ini ndinowanzo tarisa kune iyo CMS nekuda kwezvikonzero zvishoma.
Nei Tichishandisa WordPress
nakisisa dingindira zvakasiyana uye rutsigiro. Sites senge Themeforest ndidzo dzinondifadza kwandinogona kuwana matemplate anoshamisa kwazvo nemutengo wakaderera watinogona kushandisa nekuvakira vatengi vedu. Hatichape kunyange misoro yetsika zvekare sezvo tichigona kuvaka pane theme yemwana uye fungidzira ese evabereki theme theme inoshamisa maficha Nzvimbo dzinoshamisa dzinogona kuvakwa muchidimbu chenguva.
Plugin uye kusangana zvakasiyana uye rutsigiro. Nekuti akawanda mawebhusaiti anomhanya neWordPress, inofanirwa kune chero kambani inoshuvira kusangana neyakagadziriswa manejimendi system. Kubva kune vatengesi veemail, CRM, mhinduro dzekumhara peji, nezvimwe… zvave zvakaoma kuwana kambani isina kubatanidzwa.
Usage iri kwese kwese, saka kutsvaga vashandi nevatungamiriri vanoshandisa WordPress kwakajairika-nzvimbo. Kuwedzeredza iyo CMS nyowani kunogona kuda yekuwedzera yekudzidzira nguva mukati mekambani, saka kushandisa yakakurumbira kunogona kuita kuti zvinhu zvisarware zvakanyanya mukati.
WordPress Inotarisirwa Kubata mapuratifomu saFlywheel, WPEngine, Pantheon, LiquidWeb, Uye kunyange GoDaddy, uye zvakawanda zviri kuve zvakajairika. Makambani ekare ekubatira haana kumbotsigira WordPress kunyangwe ichinyanyo kufarirwa saka makambani kazhinji aive muhondo pakati pemugadziri nemusimudziri pane zvingave zvisina kunaka nesaiti. Aya masevhisi anopa chengetedzo, akavakirwa-mukati mabhakkupu, zvemukati zvekutumira netiweki, SSL zvitifiketi, kuongorora, staging, uye kuwanda kwemamwe maturusi ekuti yako saiti ive nekukurumidza uye kugadzikana.
Kana izvo zvikaita senge ndiri kutengesa WordPress, namatira neni. Nhau dzakamuka idzo dziri kutanga kutiita isu kuti tikurudzire vatengi kune mamwe maDhijitari Management MaSystem.
Nei Tisingashandise WordPress
Sales - WordPress yaishandiswa kuve inokurudzira pane chero basa rine chekuita nekutengesa, theme, kana plugin. Ivo vaigaro vharidzira chero munhu kubva kushambadzira maturusi mukati mekwavo system iyo yaipa mutengo weti pairi. Asi ikozvino, kana iwe ukabatanidza Jetpack, unosangana nemameseji nag kuti utenge masevhisi eAutoattic's backup. Nekudaro, zvese kamwe kamwe vhura sosi vatsigiri vava kutengesa mabasa avo. Ini handisi kufara vari kuita izvi, zvakangoitika kuti zvaimbove zvakashatiswa.
chibatiso - Nekuda kwekuzivikanwa kwayo, WordPress yakavewo chinangwa chevabiridzi. Avhareji saiti ine dingindira rakanyatsogadzirwa uye gumi nemaviri plugins anogona kusiya gomba rakavhurika kune vabiridzi saka varidzi vesaiti, maneja, uye varidzi vanofanirwa kungwarira kurwisa uye kuramba vari pamusoro wenyaya uye plugins yekuvandudza.
budiriro - Ndine mutengi ane saiti uye zvakajairika seti yemapulagi izvozvi izvo zvine zvingangoita zvisere nezve Google fonts mumusoro wavo nekuti dingindira ravo uye akati wandei ekugadzira plugins vese vanozvipa sevhisi. Kunyangwe paine nzira yekuona kuti sevhisi haina kudaidzwa kanopfuura kamwe, vanogadzira havana kuiteerera uye vakango wedzera zvavo mareferenzi. Izvi zvinokuvadza saiti yekumhanyisa uye chinzvimbo ... uye hachisi chinhu chinozivikanwa nevashandisi vasingazive nekugadzirisa. Maitiro asina kunaka muWordPress API kusangana kuri kuwedzera uye kuwanda kwenzvimbo. Ndine akawanda ematiketi akavhurwa nevagadziri kugadzirisa izvi zvinhu. Mazhinji anodavirira, mazhinji haasi.
Complexity - Rakajairwa peji remba muWordPress rinogona kunge riine maficha akadhirowewa kubva kumajeti, mamenyu, masayiti saiti, marongero emusoro, uye marongero e plugin Dzimwe nguva kugadzirisa chinhu chimwe pane peji, ndinopedza maminetsi makumi matatu ndichiedza kutsvaga mamiriro acho! Zviri kunetsa kuti WordPress haina kuvaka tsika yakanakisa yekuona kuti vanogadzira vanoisa marongero avo kwazviri nyore kuwana nekugadzirisa.
Saka, ndeapi mamwe marongero epamhepo ekushandisa atakaisa? Tichiri kuramba tichitarisa kuzembera paWordPress kune yayo kugona kweinjini yekutsvaga yakagadziridzwa, tiri kuona mhedzisiro inoshamisa pamwe nemamwe maratidziro ehurongwa:
Sitecore - isu takabatsira vatengesi vashoma vanoshandisa matekinoroji eMicrosoft mumakambani avo uye vakashandisa Sitecore. Iyo inonakidza CMS nerutsigiro rwakakura munzvimbo ye Enterprise. Hatina kuzeza kuikurudzira.
Squarespace - kune iyo isiri-technical do-it-yourselfer, handina chokwadi chekuti pane CMS iri nani kunze uko kupfuura squarespace. Ndine mumwe mutengi akakwanisa kuvaka yavo saiti mumavhiki mashoma asina kana ruzivo uye mhedzisiro yacho yaive yakanaka. Isu takabatsira tweak uye tune iyo saiti, asi iyo WordPress kuitisa ingadai isina kumbobvira yaitwa mune yakafanana nguva yenguva. Saiti yapfuura yaive WordPress uye manejimendi anga akanyanya kuomera mutengi kufamba uye kugadzirisa. Vakanga vakaora mwoyo kare, uye vari kufara iye zvino! Uye squarespace inopa ecommerce maficha zvakare.
Craft CMS - tiri kubatsira mutengi, Canvas, nekuvandudza saiti yavo paCraft CMS uye ini ndatova murudo nekureruka kwayo uye nyore kushandisa. Kune zvakare netiweki yakakura yemapulagi anotsigirwa-zvakanaka eCraft CMS zvakare - zvichiita kuti zvive nyore kwatiri kuwedzera zvigadziriso kune saiti yekutsvaga uye kutendeuka kugadzirisa.
Weebly - imwe DIY chikuva inoenderera mberi kufambira mberi uye kutishamisa pane zvakapfuma maficha, kusanganisira ecommerce. Hatina kukwanisa kubata mutengi pano parizvino, asi Weebly marongero ekubatanidza (maapplication) akawandisa uye anoita kunge ane zvese zvinodiwa nemunhu.
Kune vamwe kunze uko vakaita Wix kana mamwe macomputer eCMS masisitimu. Wix anga aine dzimwe nyaya neGoogle achiratidzira saiti yavo asi akashanda nesimba kuita kuti masayiti avo awedzere injini dzekutsvaga uye masayiti avo akaiswa indexed pamwe nechero vamwe kunze uko. Ini handina kana kuve neruzivo neWix mumakore achangopfuura saka ini handisi kuzozvitonga pano.
Ndezvipi CMS Zvimiro Zvaunoda Gore Rinotevera?
Kunze kwekutsvaga injini uye zvemagariro midhiya kugona, isu tinotarisa kune vedu vatengi kuti vaone zvavanoda mune zvemukati manejimendi sisitimu. Kuita nekukurumidza kuongorora kweimwe yavo masisitimu - kunyanya maCRM avo - zvinogona kutiita kuti tivasundire kune imwe nzira kana imwe nekuda kwekureruka kwekuitwa uye kutsigirwa kwekubatanidzwa kwechitatu-bato. Mawebhusaiti akanyanya kupfuura bhurocha redhijitari mazuva ano - saka kunzwisisa kuti iyo CMS inozokwana sei mune yako kushambadza uye kutengesa rwendo yakakosha musarudzo yako yepuratifomu.
Wakamira neCMS Yako here?
Isu tinotarisawo kutsamira. Kana iyo CMS isina hunyanzvi hwekunze kana kupinza neyakajeka mashandiro, inogona kuve chikonzero chekufunganya. Fungidzira kambani yako ichishanda paCMS kwemakore akati wandei, ichivaka masimba nemajini ekutsvaga, uye nekutyaira matani ekushandurwa chete kuti uone kuti urikushandisa CRM nyowani isingatsigirwe kuburikidza nekubatanidzwa kupi zvako. Chikwata chako chinofunga kuti chinoda kutama asi iyo CMS haipe chero maturusi ekuita zvakadaro.
Isu takaona izvi kakawanda - apo kambani inosungwa uye yakavharirwa mutengesi wavo. Zvinoshungurudza uye hazvina basa. Mukuru weCMS mupi uyo anozvivimba pachezvake anogara achipa nzira yekufambisa kana kubva pairi pane kuyedza kukiya mukati mevatengi vayo.
Kuzivisa: Isu takashandisa zvakabatana zvinongedzo mukati meichi posvo.
Tags: cmscms kutsamiracms kukuracms mafichacms kusanganacms kutengesacms chengetedzozvemukati manejimendi systemkuchera cmsnzvimbosquarespaceweeblywix
Jul 4, 2017 pa 5: 46 AM
Chinyorwa chinonakidza. Kunyangwe ini ndichinzwa kuti WordPress yakangwara, Iyo inoshaya mukana wekuvandudza hunyanzvi hwekushandisa. Nezve izvo zvinodiwa, iwe unozoda Sitefinity, Sitecore, Umbraco kana mamwe akafanana maCMS.